आफूले आमाबुबाकै ढिपीमा समय नपुग्दै विवाह गरेका कारण हाँस्ने खेल्ने उमेरमा परिवार र सन्तानको स्याहारमा बिताउनु परेको र आत्मग्लानी हुने गरेको उनी बताउँछिन् ।
डोटी । दीपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नं ८ का माया विष्टको कक्षा ८ मा पढ्दापढ्दै फेसबुकमा एक युवकसँग चिनजान भयो ।
सत्र वर्षीया विष्टको फेसबुकको सम्बन्धकै कारण विवाहसमेत भयो । अहिले उनी २० वर्षकी भइन् । भर्खर विवाह गर्ने उमेर भएकी विष्टका दुई सन्तान जन्मिसकेका छन् । अचेल दुई सन्तान पाल्न आफूलाई धौ धौ परेको उनी बताउँछिन् ।
उनले भनिन् – “फेसबुकले गर्दा लभ पर्‍यो । बिहे गरें । अहिले समस्या भयो । कसलाई पीडा सुनाउँ ? सहेर बसेकी छु ।” आफूले सानै उमेरमा गरेका बिहेप्रति अहिले निकै पछुतो छ उनलाई । आँशु पुछ्दै उनले भनिन् – “लहलहैमा लागेर सानै उमेरमा बिहे गरियो । त्यसको परिणाम भोग्दैछु ।”
त्यस्तै जिल्लाको बडिकेदार गाउँपालिका वडा नं ४ मान्नाकापडीका १७ वर्षीय दीपक बोहरा र छिमेकी गाउँकी १४ वर्षीया शर्मिलाबीच पनि फेसबुककै कारण विवाह भयो । बिहे गरेको दुई वर्षमै छोरी जन्मिन् । आफूहरुबीच सधैं झैझगडा र कलह मात्रै हुने गरेको शर्मिला बताउँछिन् । उनी भन्छिन् – “बुद्धि नपुगेर सानैमा विवाह गरें । अहिले झगडा मात्रै हुन्छ । कसरी जीवन धान्ने होला ? चिन्तामा छु ।”
दीपायल सिलगढी नगरपालिका–८ लडागडाकी चनरी नेपाली पनि बालविवाहका कारण आफ्नो भविष्य बर्बाद भएको निष्कर्षमा पुगेकी छन् । आमाबुबाले नै बालविवाह गरिदिएको उनको आरोप छ । आफूले आमाबुबाकै ढिपीमा समय नपुग्दै विवाह गरेका कारण हाँस्ने खेल्ने उमेरमा परिवार र सन्तानको स्याहारमा बिताउनु परेको र आत्मग्लानी हुने गरेको उनी बताउँछिन् । “आमाबुबाले सानैमा बिहे गरिदिए, उनीहरूको बोझ बनेर माइत बस्नु छोरीको धर्म होइन,” उनले भनिन् – “बाल्याकाल कसरी ढल्क्यो थाहै भएन । सानैदेखि पढ्ने रहर हुँदाहुँदै घरकाले विवाह गरिदिए । अहिले पछुताउनु बाहेक अरू विकल्प छैन ।”
पारिवारिक दवाव, साथीसङ्गीको लहलहै, अभिभावकको हेरचाह तथा पालनपोषणमा उदासीनता, राम्रो घरपरिवारबाट भन्दै सानैमा बिहे गराइदिने चलन, मोबाइल र इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगका कारण डोटी जिल्लामा उमेर नपुग्दै धेरै किशोरकिशोरीको विवाह हुने गरेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । दीपायल सिलगढी नगरपालिका वडा न ८ (साबिकको लडागडा गाविस) मा मात्रै विगत तीन वर्षमा १६३ वटा बालविवाह भएको देखिएको छ । साबिकको क्षेत्रीय सदरमुकाम दीपायल राजपुर नजीकै रहेको उक्त वडामा बालविवाह तीन वर्षदेखि क्रमशः उकालो लागिरहेको छ ।
जिल्लामा २०७३ वैशाखदेखि २०७५ चैत्रसम्म १३३ जना बालिका र २७ जना बालकको बालविवाह भएको विभिन्न सङ्घसंस्थाको अभिलेखबाट देखिएको छ । अधिकाँश बालबालिका १४ देखि १९ वर्ष्भित्रका बालबालिका छन् । गरीब, विपन्न र शिक्षाबाट वञ्चित परिवारमा बालविवाह बढ्दै गएको यहाँका स्थानियवासी बताउँछन् ।
कानूनमा विवाह गर्ने उमेर २० तोकिए पनि यसको खासै पालना गरिएको पाइँदैन । सामुदायिक विकास केन्द्र डोटीले बालविवाह गरेका दम्पतीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन तथा सम्भावित बालविवाहलाई निरुत्साहित गर्न नगरपालिकासँगको सहकार्यमा विभिन्न आयआर्जनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दैआएको छ ।
उमेर नपुग्दै बिहे गर्दा पाठेघर खस्ने, विभिन्न रोगहरूबाट सङ्क्रमण हुने, शरीर कमजोर हुने गरेको जिल्ला अस्पताल डोटीका डा गिरीश अवस्थीले बताए । दीपायल सिलगढी नगरपालिकाको वडा नं ९ मा १०० बालबालिकामा गरिएको अर्को एक सर्वेक्षणमा २० प्रतिशत दम्पतीका ७ वटा सन्तान रहेको भेटिएको छ । त्यस्तै, ५० प्रतिशत दम्पतीको ४ देखि ६ र ३० प्रतिशतको ३ जनासम्म सन्तान रहेको भेटिएको छ । रासस